SURIYA ၏ကျော်ကြားသောဟိန်ဒီရုပ်ရှင် (၁၂) စာရင်း။ - ဘောလီးဝုဒ်သရုပ်ဆောင်တွေ
Suriya ၏တင့်တယ်သောရုပ်ပြဇာတ်ကားများစာရင်း (၁၂)
Suriya သည်တောင်အိန္ဒိယရုပ်ရှင်၏လူကြိုက်များသောမျက်နှာဖြစ်သည်။ သူလည်းထုတ်လုပ်သူတစ် ဦး အဖြစ်နာမည်ကြီးခဲ့သည်။ Suriya သည်အောင်မြင်သောတောင်ကိုရီးယားရုပ်ရှင်အများအပြားကိုရိုက်ကူးခဲ့ပြီး၊ သူ၏ပရိသတ်များသည်အိန္ဒိယတွင်လုံးလုံးလျားလျားဖြစ်သောကြောင့်သူ၏ရုပ်ရှင်ကားများကိုခေါ်ဝေါ်ကြသောကြောင့်ဖြစ်သည်။ ဤတွင် Suriya ၏ရုပ်ရှင်ဟုခေါ်ဝေါ်သောဟိန်ဒီစာရင်းဖြစ်သည်။
၁ ။ Aaru 'ကို Ghajini ပြန်လာခြင်း' အဖြစ်ဟိန္ဒူဘာသာဖြင့်ခေါ်ဝေါ်
Aaru (၂၀၀၅) သည်အိန္ဒိယဘာသာစကားပြောသောလူဆိုးဂိုဏ်းတစ်ခုဖြစ်သော Hari မှရေးသားပြီးဒါရိုက်တာဖြစ်သည်။ ကြယ်ပွင့် ဆီးရီးယား နှင့် Trisha Krishnan ဦး ဆောင်အခန်းကဏ္၌တည်၏။ ဒီရုပ်ရှင်ဟာ Box Office မှာပျမ်းမျှအားဖြင့်ဟိန္ဒူဘာသာလို့အခေါ်ခံရသည် 'Ghajini ၏ပြန်လာခြင်း' ။
ကြံစည်မှု - Aaru သည် Viswanathan ရှိအိမ်ခြံမြေလုပ်ငန်းတစ်ခုတွင်ဆရာတစ် ဦး ကိုတွေ့သည်။ သူသည်လက်ျာလက်သူဖြစ်လာပြီးသူ၏လေလံများအားလုံးကိုတရားဝင်ဖြစ်စေ၊ တရားမဝင်ဖြစ်စေသည်။ Viswanathan ကသူ့ကိုသစ္စာဖောက်သောအခါ Aaru ကသူ့ကိုသတ်ရန်ကျိန်ဆိုသည်။
နှစ်ခု။ ' Singam '' The Fighterman Singham 'အဖြစ်ဟိန္ဒူအတွက်အမည်ရှိ
Singam (၂၀၁၀) သည်အိန္ဒိယတမီးလ်လှုပ်ရှားမှု - မာလာလာရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားတစ်ကားဖြစ်သည် မသီတာရှာတီ ဦး ဆောင်၌တည်၏။ ဒီရုပ်ရှင်ဟာအလွန်ထိရောက်တဲ့ဇာတ်ကားဖြစ်ပြီးဟိန္ဒူဘာသာလို့အမည်ပေးထားပါတယ် 'The Fighterman Singham' ။
ကြံစည်မှု - ရိုးသားသည့်ရဲအရာရှိ Durai Singam သည်ကြီးမားသောအချိန်ကိုလုယက်သူတစ် ဦး ဖြစ်သူ Mayil Vaaganam နှင့်အတူချိုကိုပိတ်ဆို့လိုက်သည်။
'' Chennai v / s ကိုတရုတ် '' အဖြစ်ဟိန္ဒူအတွက်အမည်ရှိ 3. '' 7aum Arivu ''
7aum Arivu (2011) သည်အိန္ဒိယသိပ္ပံစိတ်ကူးယဉ်ကိုယ်ခံပညာရုပ်ရှင်ဖြစ်ပြီး၎င်းသည် AR Murugadoss မှရိုက်ကူးထားသော Suriya နှင့် Shruti Haasan အဓိကအခန်းကဏ္istမှပါဝင်ခဲ့ပြီးဂျော်နီတီငုယင်။ ဒီရုပ်ရှင်ဟာနာမည်ကြီးပြီးဟိန္ဒူဘာသာလို့အမည်ပေးထားသည် 'ချန်နိုင်း v / s တရုတ်' ။
ကြံစည်မှု - Bodhidharma သည်ကိုယ်ခံပညာဆိုင်ရာကျွမ်းကျင်သူဖြစ်ပြီးသူသေဆုံးပြီးနောက်တရုတ်နိုင်ငံတွင်ကိုးကွယ်သည်။ နှစ်အနည်းငယ်အကြာတွင် Dong Lee သည်ဇီဝဗေဒဆိုင်ရာစစ်ပွဲဆင်နွှဲရန်အိန္ဒိယနိုင်ငံသို့လာရောက်ခဲ့ပြီး Bodhidharma မှဆင်းသက်လာသော Aravind သည်သူ့ကိုတားဆီးရန်ကြိုးစားသည်။
၄ ' နန္ဒ '' Vaastav The Return 'အဖြစ်ဟိန္ဒူဘာသာဖြင့်ဖော်ပြခဲ့တယ်
နန္ဒ (၂၀၀၁) သည်အိန္ဒိယတမီးလ်အရေးအသားဒရာမာဇာတ်ကားဖြစ်ပြီး Bala ကရေးသားပြီးဒါရိုက်တာ Suriya နှင့် Laila ကိုအဓိကနေရာမှသရုပ်ဆောင်ထားပြီး Rajkiran, Saravanan နှင့် Rajshree တို့သည်အခြားပံ့ပိုးမှုအခန်းကဏ္ play မှပါ ၀ င်သည်။ ဒီရုပ်ရှင်ဟာစီးပွားဖြစ်အောင်မြင်မှုတစ်ခုဖြစ်ပြီး၊ 'Vaastav The Return' ။
ကြံစည်မှု - Nandha ဖခင်အားသတ်မှုဖြင့်ထောင်ဒဏ်တသက်ကျခံရပြီးနောက်ပြန်လည်ရောက်ရှိ သူကသူ့အမေကိုကယ်ဖို့သူ့ကိုသတ်ခဲ့ပေမဲ့သူမခွင့်မလွှတ်ခဲ့ဘူး။ ထို့နောက်သူသည်သီရိလင်္ကာဒုက္ခသည်များကိုခိုလှုံစေသော Periyavar ၏ခေါ်ဆောင်ခြင်းခံရသည်။
၅ ' Mounam Pesiyadhe '' Ghatak ပြန်လာ 'အဖြစ်ဟိန္ဒူအတွက် Dubbed
Mounam Pesiyadhe (၂၀၀၂) သည် Ameer Sultan မှရေးသားထားသောဒါရိုက်တာတမီးဘာသာစကားဖြင့်ဟာသဇာတ်ကားဖြစ်သည်။ ၎င်းသည် Suriya နှင့် Trisha ကို Nandha၊ Mahaa နှင့် Anju Mahendra နှင့်အတူအဓိကနေရာတွင်ပါဝင်သရုပ်ဆောင်ထားသည်။ ဒီရုပ်ရှင်ဟာ Box Office မှာလူကြိုက်များခဲ့ပြီးဟိန္ဒူဘာသာလို့လည်းခေါ်ကြတယ် 'Ghatak Returns' ။
ကြံစည်မှု - သူ့သူငယ်ချင်း Kannan နှင့်မတူသည်မှာ Gautham သည်ချစ်ခြင်းမေတ္တာအမည်ဖြင့်ပရောပရည်လုပ်ခြင်းကိုမယုံကြည်ပါ။ Gautham နောက်ဆုံးတော့ Sandhya, Kannan ရဲ့ဝမ်းကွဲနှင့် Kannan ရဲ့မိဘများကသူ့ကိုလက်ထပ်ချင်မိန်းကလေးနှင့်အတူမေတ္တာ၌ကျရောက်ပါတယ်။
၆ ။ Singam II 'Main Hoon Surya Singham II' အဖြစ်ဟိန္ဒူဘာသာဖြင့်ဖော်ပြခဲ့သည်
မွေးဖွား၏သရုပ်ဆောင် rajinikanth နေ့စွဲ
Singam II (၂၀၁၃) သည်ဟာမီမှရေးသားသောဒါရိုက်တာတစ် ဦး ဖြစ်သောအိန္ဒိယတမီးလ်ရုပ်ရှင်ကားဖြစ်သည်။တီသူက Anushka Shetty နဲ့အတူ Suriya၊ Hansika motwani , Vivek နှင့် Santhanam အခန်းကဏ္supportingကိုထောက်ပံ့သောဇာတ်ကားသည်အလွန်အောင်မြင်သောဇာတ်ကားဖြစ်ပြီးဟိန္ဒူဘာသာအဖြစ်အမည်ပေးထားသည် 'Main Hoon Surya: Singham II' ။
ကြံစည်မှု - Duraisingam သည် Thoothukudi ကျောင်းရှိ NCC အရာရှိတ ဦး အဖြစ်လျှို့ဝှက်ထားသည်။ သူသည်နယ်မြေကိုအုပ်ချုပ်သောရာဇ ၀ တ်သားနှစ် ဦး ဖြစ်သည့် Bhai နှင့် Thangaraj တို့အားကိုင်တွယ်ရမည်ဖြစ်သည်။
၇ ။ Maattrraan ' '' အမှတ်အဖြစ်ဟိန္ဒူအတွက်အမည်ရှိ ၁ ယုဒ
မတ္ထရာ (၂၀၁၂) သည်တီ V သိပ္ပံပညာရှင်တစ် ဦး ဖြစ်ပြီး K V Anand မှပူးတွဲရေးသားကာဒါရိုက်တာဖြစ်သည်။ ၎င်းနှင့် Suriya ကိုသရုပ်ဆောင်ထားသည် Kajal Aggarwal စဉ်အခန်းကဏ္များတွင် Sachin Khedekar နှင့် Tara တို့သည်ပံ့ပိုးမှုအခန်းကဏ္ play မှပါ ၀ င်သည်။ ဤရုပ်ရှင်သည် flop ဖြစ်ပြီး Hindi ဟုအမည်ပေးထားသည် 'နံပါတ် ၁ Judwaa - မချိုးဖောက်နိုင်' ။
ကြံစည်မှု - ပုံပြင်ဟာသူတို့ရဲ့ဖခင်ရဲ့ဖွံ့ဖြိုးစည်ပင်တဲ့စီးပွားရေးကိုကာကွယ်ဖို့အတွက်အမြွှာညီနောင်အမြွှာတွေရဲ့ရုန်းကန်လှုပ်ရှားမှုတွေကိုဖော်ပြထားပါတယ်။ သူတို့ရဲ့ကုမ္ပဏီ၏ကုန်သွယ်ရေးလျှို့ဝှက်ချက်များကိုခိုးယူရန်ရုရှားသူလျှိုလုပ်ရန်ကြံစည်မှုနှင့်အတူ, နှစ်ခုသူမ၏ရပ်တန့်နိုင်ပါလိမ့်မည်နည်း
8. အဖြစ် '' Vel '' အဖြစ်ဟိန္ဒူအတွက်အမည်တပ်ထားသော 'အဓိက Faisla Karunga ''
ကောင်းပြီ (၂၀၀၇) သည်ဟာရီမှရေးသားသောဒါရိုက်တာတမီးဘာသာစကားမိသားစုမိသားစုပြဇာတ်ဖြစ်သည်။ ၎င်းမှာ Suriya နှင့်သရုပ်ဆောင်ထားသည် ငန် နှင့် Vadivelu၊ Kalabhavan Mani နှင့် Nassar တို့ကိုပံ့ပိုးပေးသည့်အခန်းကဏ္inတွင်ပါ ၀ င်သည်။ ဒီရုပ်ရှင်ဟာ box-office မှာ blockbuster ဖြစ်ပြီးဟိန္ဒူဘာသာလို့လည်းခေါ်ကြတယ် ‘ပင်မ Faisla Karunga ' ။
ကြံစည်မှု - Charanraj သည်သူ၏ဇနီး Saranya သည်အမွှာများမွေးဖွားလာသောအခါစိတ်လှုပ်ရှားမိသည်။ ရထားပေါ်မှထူးဆန်းစွာပျောက်ကွယ်သွားသောသူတို့၏သားတစ် ဦး သည်သို့သော်သူတို့၏ပျော်ရွှင်မှုသည်တိုတောင်းသည်။
အဖြစ် '' ဟိန္ဒူအတွက်အမည်တပ်ထားသော 9. '24' 'Time Story'
၂၄ (၂၀၁၆) သည်အိန္ဒိယတမီးလ်ဘာသာစကားသိပ္ပံပညာစိတ်ကူးယဉ်ဇာတ်ကားဖြစ်သည်။ ဒီရုပ်ရှင်မှာမင်းသမီး Suriya ကိုသရုပ်ဆောင်တွေပါဝင်သရုပ်ဆောင်ထားပါတယ် မခင်မာရုသ Prabhu , Nithya Menen နှင့် Saranya Ponvannan ဦး ဆောင်အခန်းကဏ္ in ။ ၎င်းသည် super hit ရုပ်ရှင်ဖြစ်ပြီး Hindi ဟုအမည်ပေးထားသည် 'Time Story' ။
ကြံစည်မှု - သိပ္ပံပညာရှင် Sethuraman သည်အချိန်ခရီးသွားသည့်ကိရိယာတစ်ခုကိုတီထွင်သည်။ သူ၏အမြွှာညီဖြစ်သူက၎င်းကိုကိုင်ချင်သည်။ အဆိုပါ gadget ကိုဖမ်းယူဖို့ Sethuraman ရဲ့သားနှင့်သူ၏မကောင်းသောအမွှာအကြားတစ် ဦး ကခါးသောစစ်တိုက်။
၁၀။ ဟိန္ဒူဘာသာအား 'Khatarnak Khiladi 2' ဟုခေါ်သော 'Anjaan'
အာဂျာ (၂၀၁၄) သည်အိန္ဒိယတမီးလ်ဘာသာစကားအက်ရှင်ဇာတ်ကားဖြစ်ပြီး N. Lingusamy မှရိုက်ကူးထားသည်။ ရုပ်ရှင်မှာ Suriya ကို Samantha Ruth Prabhu နှင့် Bollywood ရုပ်ရှင်သရုပ်ဆောင်များပါဝင်သရုပ်ဆောင်ထားသည် Manoj bajpayee , Vidyut Jamwal နှင့် Dalip Tahil ပံ့ပိုးမှုအခန်းကဏ္ play မှပါဝင်သည်။ အဆိုပါရုပ်ရှင်သည် box-office တွင်ပျမ်းမျှဖျော်ဖြေခဲ့ပြီးဟိန္ဒူဘာသာအဖြစ်သတ်မှတ်ခံရသည် 'Khatarnak Khiladi 2' ။
ကြံစည်မှု - သူ၏ပျောက်ဆုံးနေသောအစ်ကိုအားရှာဖွေရန်မွန်ဘိုင်းသို့ရောက်လာသော Krishna သည်သူသည် Raju Bhai ဟုလူသိများသောကြောက်မက်ဖွယ်လူဆိုးဂိုဏ်းတစ်ခုဖြစ်ကြောင်းသိရှိရသည်။ Krishna ဟိန္ဒူကသူ့အစ်ကို၏ရန်သူများနှင့်တွေ့ဆုံသည့်အခါနောက်ပိုင်းတွင်စိတ်ဝင်စားဖို့လှည့်ကွက်တွေ့ရှိရသည်။
တကျိပ်တပါး။ ' Ayan 'ကို Vidhwanshak The Destroyer' အဖြစ်ဟိန္ဒူဘာသာဖြင့်ခေါ်ဝေါ်
.ရာ (၂၀၀၉) သည် Tamil V. ဇာတ်ကားဖြစ်ပြီးပူးတွဲရေးသား။ K. V. Anand မှရိုက်ကူးခဲ့သည်။ Suriya, Prabhu သရုပ်ဆောင်ထားသောအဆိုပါရုပ်ရှင်, တာမန်နာ နှင့် Akashdeep Saighal တို့က ဦး ဆောင်မှုအခန်းကဏ္inတွင်ရှိသည်။ ၎င်းသည် super hit ရုပ်ရှင်ဖြစ်ပြီး Hindi ဟုအမည်ပေးထားသည် 'Vidhwanshak The Destroyer' ။
ကြံစည်မှု - မှောင်ခိုတင်သွင်းသောဒေဗားသည်မာဖီးယားဂိုဏ်းသားဒက်၏လက်အောက်တွင်အလုပ်လုပ်သည်။ Kamlesh သည်ပြိုင်ဘက်မာဖီးယားဂိုဏ်းတစ်ခုဖြစ်ပြီး Das ကိုစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွင်လွှဲပြောင်းယူလိုသည်။ ကျန်ဇာတ်လမ်းမှာ Deva နှင့် Kamlesh တို့အကြားဖြစ်ပျက်နေသည့်အရာဖြစ်သည်။
၁၂ ‘ Aadhavan ' အဖြစ်ဟိန်ဒီအတွက်အမည်ပေးထားသည် 'Dildaar - The Arya'
Aadhavan (၂၀၀၉) သည် K. အက်စ်ရာဗစ်ကူမာမှရိုက်ကူးသောတမီးလ်ဇာတ်ကားဖြစ်သည်။ အဆိုပါရုပ်ရှင် Suriya နှင့်သရုပ်ဆောင်သည် နာယက Murali၊ Vadivelu၊ Anand Babu၊ Ramesh Khanna, B. Saroja Devi နှင့်အတူအဓိကအခန်းကဏ္မှပါ ၀ င်သည်။ Rahul Dev ၎င်း၏ထောက်ခံမှုသွန်းအတွက်, Sayaji Shinde ။ အဆိုပါရုပ်ရှင် box-office မှာကောင်းစွာဖျော်ဖြေနှင့်အဖြစ်ဟိန္ဒူအတွက်ဟုအမည်ပေးထားခဲ့သည် 'Dildaar - The Arya' ။
ကြံစည်မှု - တရားသူကြီးတစ် ဦး ကိုသတ်ရန်လူသတ်သမားတစ် ဦး သည်သူ၏ကြိုးပမ်းမှုတွင်ပျက်ကွက်ခဲ့သည်။ ထို့နောက်သူသည်အိမ်ထဲသို့ဝင်ခြင်းနှင့်မိသားစု၏ချစ်ခြင်းမေတ္တာအပေါ်အနိုင်ရရှိခဲ့သည်။ သူနီးပါးဖမ်းမိရဲ့သောအခါတစ်ချိန်ကသူတရားသူကြီးရဲ့ရှည်လျားသောဆုံးရှုံးခဲ့ရသားရဲ့မိသားစုမှမုသာစကားကို။
Salman khan အမြင့်
တောင်ဘက်အိန္ဒိယသရုပ်ဆောင် allu arjun ခန္ဓာကိုယ်
ဟုအမည်ပေးထားသည့် allu Arjun ရုပ်ရှင် Hindi
allu arjun အားဖြင့်ရုပ်ရှင်အပြည့်အဝအမည်ရှိ
မိဖုရား iz လိရှဗက်၏အသက်အရွယ်က